Global Voices teny Malagasy » Raharaham-pitiavana/fankahalan’ny Maraokana an’i Obama · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Jona 2009 4:18 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Alaoui Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Maraoka, Fifandraisana iraisam-pirenena, Politika
Na talohan’ny fanandratana an’i Obama aza, ary efa talohan’ny nanapahany hoe firenena iza amin’ny ‘Moyen-Orient’ na Afrika Avaratra no handray ny kabariny momba ny pôlitika ivelany, ireo Marokana-Amerikana maromaro dia efa niezaka nanao tsindry bokotra mba handalovan’ny filoha Obama any Rabat. Ny sasany indray nifidy an’i Casablanca. Nisy vohikala mihitsy aza, President Obama to Speak in Morocco , nosokafana ho amin’izany:
Ny blogoma  (anarana hafa iantsoana ny tontolon’ny fitoraham-blaogy Maraokana) sy ireo Maraokana maro mampiasa Twitter dia nandray tamin’ny fomba hafa ny kabary  tany Kaira. Ireto misy santionany amin’izany fihetsika izany.
Efa novinavinaina ihany ny kabarin’i Obama tany Kaira. “Ahoana raha mifankahita amin’ny Obama aho?” hoy i Mohamed Malouk manontany tena. Raha mitoraka blaogy ao amin’ny Elmafjoue  [Ar] izy, dia miteny:
Nanaraka ilay hetsika i Larbi_org  [Fr] ary nandefa tweet izy:
Taoriana kely, tao anatina ‘tweet’ fanindroany, nanontany tena  i Larbi hoe “Inona no tian’i Obama tenenina amin’ilay hoe ‘Tontolo silamo’ ?”.
Maro ihany koa ireo fihetsika nampihomehy rehefa  nalefan'i @annouss tamin'ny alàlan'ny tweet ny nolazain'i @mbaa…
Nampitaha ny kabary tany Kaira tamin’ny kabarin’i JFK «Ich bin ein Berliner» i Citoyen Hmida. Nanambara  [Fr] izy fa:
Nanampy  ihany i Citoyen Hmida:
Nitovitovy tamin’izany koa ny fihetsik’i Abdoukili. Nanoratra  izy:
Ireo mpitoraka blaogy hafa,na dia nankasitraka ny kabarin’i Obama aza dia naka ilay fomba ‘Samia miandry dia hiara-mahita’. Laila Lalami, mpanoratra Maraokana monina any Etazonia dia nanoratra :
Tsy ny olon-drehetra anefa no gaga tamin’ireo tenin’i Obama. Abdelhak al'Koush, mpitoraka blaogy ao amin'ny Afinina  [Ar], dia nandefa fanakianana mivaivay ho an’ny filoha Amerikana ary nanontany momba ireo hery manosika azy taminà lahatsoratra tsy misy fahalalam-pomba. Nanoratra  izy:
Maro ny zavatra notenenina momba ilay kabarin’i Obama tany Kaira. Anisan’izy ireo i Abdoukil izay naneho sori-panantenana farany teo am-pamaranana ny lahatsorany tamin’ny fitenenana  fa
Nosoratana niaraka tamin’i Hisham  ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/06/11/2552/
 President Obama to Speak in Morocco: http://www.obamatospeakinmorocco.com/
 Ny blogoma: https://globalvoicesonline.org/2009/05/28/morocco-the-blogmas-journey-continues/
 nanontany tena: http://twitter.com/Larbi_org
 Nanambara : http://www.citoyenhmida.org/obama-parle-aux-musulmans/